China Thermochromic pigment for thermochromic Paint Thermochromic Ink Ink Thermochromic Indwangu Ukukhiqiza kanye nefektri | Ngaphezulu
I-pigment ye-Thermochromic ye-Thermochromic Paint Indwangu ye-Thermochromic Ink Indwangu ye-Thermochromic
Izingulube ze-Themochromicakhiwa ama-micro-capsules aguqula umbala ubuyele emuva. Lapho izinga lokushisa likhuphukela ezingeni lokushisa elicacisiwe i-pigment isuka kombala iye kumbala (noma isuka kombala owodwa iye komunye umbala). Umbala ubuyela kumbala wokuqala njengoba i-pigment sehlile.
Imibala ye-Themochromic yakhiwa ngama-micro-capsules ashintsha umbala ubuyele emuva. Lapho izinga lokushisa likhuphukela ezingeni lokushisa elicacisiwe i-pigment isuka kombala iye kumbala (noma isuka kombala owodwa iye komunye umbala). Umbala ubuyela kumbala wokuqala njengoba i-pigment sehlile.
Icubungula izinga lokushisa
Izinga lokushisa lokucubungula kufanele lilawulwe ngaphansi kuka-200 ℃, ubukhulu abufanele budlule ama-230 ℃, isikhathi sokushisa nokunciphisa izinto. (Ukushisa okuphezulu, ukushisa isikhathi eside kuzolimaza izakhiwo zombala we-pigment).
I-Thermochromic pigment ingasetshenziselwa zonke izinhlobo zezindawo nokuxhumana okufana nopende, ubumba, amapulasitiki, uyinki, izitsha zobumba, indwangu, iphepha, ifilimu yokwenziwa, ingilazi, umbala wezimonyo, i-nail polish, i-lipstick, njll. uyinki, Screen
uhlelo lokuphrinta, ukumaketha, ukuhlobisa, izinjongo zokukhangisa, amathoyizi epulasitiki nezindwangu ezihlakaniphile noma yini okucatshangwa ngumcabango wakho.
Okweplastiki: I-pigment Thermochromic nayo ingasetshenziswa ngemikhiqizo yeplastiki yomjovo noma imikhiqizo ye-extrusion efana ne-PP, i-PU, i-ABS, i-PVC, i-EVA, i-silicone, njll.
Okokumboza: i-pigment thermochromic efanelekile kuzo zonke izinhlobo zemikhiqizo yokumboza ebusweni.
Okwezinki: i-pigment thermochromic efanelekayo kuzo zonke izinhlobo zokuphrinta izinto, kufaka phakathi indwangu, iphepha, ifilimu yokwenziwa, ingilazi, njll.
* Ifanele ubuciko bemvelo, i-nail polish noma obunye ubuciko bezipikili bokufakelwa. - Luhlala isikhathi eside: Alikho iphunga, i-eco-friendly, ukumelana kahle nokushisa.
* Ifanele Ukwakha umbala oshintsha i-slime ye-thermochromic eshintsha umbala ngokushisa kwasekhaya noma ekilasini.
* Kufanelekile ukuphrinta kwendwangu, ukuphrinta kwesikrini, uyinki wezokuphepha.
Langaphambilini I-Photochromic pigment UV pigment color change powder ngokukhanya kwelanga
Olandelayo: I-UV fluorescent pigment yokuphrinta okulwa nokukhohlisa
Idayi ebomvu ebomvu yeFluorescent yeGreenhouse Film
UV fluorescent sombala anti-falsification p ...
Photochromic sombala UV sombala ushintsho umbala po ...
Umbala we-UV fluorescent we-anti-falsification p ...